Home » Creative Writing » Noble Silence and Hearer
Posted by alinsett on Mar 30, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., History, My Dear Diary, Short Story | 10 comments
နီ စာဖတ်တာတွေ များနေပြီ….
အနုပညာမှာ ပြောခြင်း ပြခြင်းနဲ့အပြိုင်
.အနုပညာသာ မရှိရင် လူ့လောကကြီးဆိုတာလည်း ဘယ်ရှိမလဲနော်။ အားလုံးဟာ အရုပ်တွေ ဖြစ်နေတော့မှာပေါ့။ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် အလက်ဇင်းရေ။
အစ်မ လာဖတ်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူး…
မှတ်စုနဲ့ ထုတ်ထားတယ်… ပြီးမှ မေးမယ်..
​စော​စောက​လေးပဲ ဆြာSitt Nyein ရဲ့ စ​တေးတပ်​စ်​​လေး​တွေ့လိုက်​ရ​သေးတယ်​ ။
ကဲ ငြင်းချင်​တဲ့သူငြင်း !
စာပေအနုပညာက ကျနော့်ကို အသည်းခွဲမသွားလောက်တဲ့
ဖတ်နေရင်း ကင်းကောင်လေး တွေးသလို တွေးလိုက်မိတယ်။
မပျက်မကွက် လာရောက် ဖတ်ရှုအားပေးသွားတဲ့ မမဂျီးကိုလည်း ကျေးဇူးပါလိုစ့်…
ရေးအားကောင်းတဲ့ အလင်းဆက် ဒညင်းဝက်
.အောင်မိုးသူလည်း..ရေးအားရော တွေးအားပါ ကောင်းပါတယ်နော်.. ။